CNF LE NUG KARLAK HNATLAKNAK MISEN AN THU CANG – The Chinlung Post
CNF le Caankarlak Cozah NUG Karlak Hnatlaknak Minsen an Thu Kho. Myanmar ram ah Federal Democracy uknak phung ser ding in le rialdip uktu (SAC ralhrang) hmun khatte ah doh tti ding in CNF le NUG karlak ah nihin (May 29) ah hnatlaknak minsen an thu kho, tiah NUG le CNF nih offical in thawng an thanh. Cu hnatlaknak ah cun NUG le CNF karlak ah pakhat le pakhat i theihpinak le i upatnakaum i,
Rialdip uktu (SAC Ralrhrang) dohdalnak rian ah le Federal Democracy rampi sersiamnak rian ah kutsih in kan ttuan tti lai timi pawl an i tel. Cu Hnatlaknak cu CNF lei in Chairman Pu Zing Cung, vice-chairman le secretary pawl nih minsen an thut bang in NUG lei zong in Union Minister Mann Win Khine Tann, Foreign Minister, Home Minister le Defense Minister hna nih minsen an thut ve hna.
NUGနှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) တို့အကြား စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်​ရေးနှင့် ဖက်ဒရယ် တည်​ဆောက်​ရေး သဘောတူညီ လက်မှတ်ထိုး. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) နှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) တို့အကြား အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တော်လှန် ရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ကျင့်သုံးရေးအတွက်နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ကို ယနေ့ မေလ ၂၉ ရက်တွင် အောင်မြင်စွာ လက်မှတ်ရေးထိုး​ကြောင်း NUG က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ဘက်မှ နိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတကြီး ဒူဝါလရှီးလ နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်း၊ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ နှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) မှ ဥက္ကဌ ပူးဇင်ကျုံး၊ ဒု-ဥက္ကဌများ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးများမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။ cREDIT: The Chin Journal